13 ruux oo afar kamid ay ka soo jeedaan Hirshabelle oo Gaalkacyo lagu dilay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
13 ruux oo afar kamid ay ka soo jeedaan Hirshabelle oo Gaalkacyo lagu dilay
A warsame 15 June 2019 15 June 2019
Mid ka mid ah ehelada dadka lagu diley magaalada Gaalkacyo ayaa u sheegay weriye ka tirsan jowhar.com in afar ruux oo ka mid ah dadka la diley ay yihiin dad ka soo jeeda magaalada Jowhar halka sagaalka kalana ay yihiin dad ka soo jeeda gobolada Koofurgalbeed.
Meydka dadka lagu diley xalay duleedka Gaalkacyo ayaa la sheegay in dabley hubeysan ay diideen in la duugo iyagoo dalbaday in ehelada dadka la diley ay keenaan dadkii diley askari ka mid ahaa ciidamada nabadsugida.
Hase yeeshee dadaalo ay sameeyeen qaar ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa u suurtogashay inay fasaxaan duugsita meydka.
Tagged Dadka lagu dilay Gaalkacyo
BREAKING: 12 Kenyan soldiers killed in explosion